छनौट गर्नुहोस् दृश्य - स्लाईड क्रमबद्वकर्ता, एक वा बढी स्लाईडहरू चयन गर्नुहोस्, र पछि अर्को स्थानमा स्लाईडहरू तान्नुहोस्. बहु स्लाईडहरू चयन गर्नका लागि, सिफ्ट होल्ड गर्नुहोस् र स्लाईडमा क्लिक गर्नुहोस्. चयन स्लाईडको प्रतिलिपि निर्माण गर्न, होल्ड गर्नुहोस् Ctrl तपाईँले तानेको बेला. माउस सूचकले जोड सङ्केतमा परिवर्तन हुन्छ. तपाईँले अर्को खुला LibreOffice इम्प्रेस कागजातमा स्लाईडको प्रतिलिपि तान्न सक्नुहुन्छ.